Sustanon 250 Mashandisiro, Nhanho, Nhamba, Zvipo, Mazano
Zvose pamusoro peSustanon 250
1.Chii Sustanon 250? 2. Sustanon 250 Uses
3.Sustanon 250 Dosage 4.Sustanon 250 Purogiramu
5.Sustanon 250 migumisiro 6.Sustanon 250 hafu yeupenyu
7.Sustanon 250 zvikomborero 8.Sustanon 250 mhinduro
9.Sustanon 250 inotengeswa 10.Sustanon yekuvaka muviri-summary
1. Chii chinonzi Sustanon 250?
Sustanon 250 imwe ye steroid iyo yakakurumbira zvikuru uye inoshandiswa zvikuru mumunda wemishonga uyewo mukugadzira muviri. Inowanzoshandiswa kurapa varume vane mazamu mashoma e testosterone kuvandudza utano hwevanhu. Testosterone kukurudzira kudzorerazve tsika uye hutano hwevarume. Chibereko chacho chinoshandiswawo zvikuru mumasangano ekuvaka muviri. Inonyanya kuzivikanwa nemigumisiro yayo yakawanda mukubatsira varimi vemuviri kuti vave nekutsanya nekukurumidza kwekutenderera kwemisungo.
Kubudirira kwe steroid iyi inodzokera kumashure kwe1970s. Yakagadzirwa neOganon Pharmaceuticals Company. Zita rokuti Sustanon 250 inowanzova zita rechiratidzo che testosterone. Ichi chigadzirwa chine esters mana e testosterones iyo inonzi propionate, phenylpropionate, isocaproate, uye decanoate. Chinangwa chokubatanidza esters muSustanon chaive kuwedzera kubudirira kwayo uye kuwedzera kumira kwe testosterone serum. Nokusanganiswa kwakadaro kweesters, Sustanon 250 naizvozvo ndeimwe yepamusoro inowanika testosterone mix inowanika. Chigadzirwa chacho chine zvese marefu uye mashoma esters saka zvinogona kugara kwenguva yakareba mumuviri.
Kunyange zvazvo Sustanon inoshandiswa pamabasa ekurapa, haina kumbobvumirwa nemakethe emarudzi akawanda akadai seEurope kana American FDA. Zvisinei, avo vanoshandisa iyo kumushandiswa kwezvokurapa kwepamutemo kunoda kutsvaga mishonga inogamuchirika kubva kuvanachiremba.
Zita rechigadzirwa ndiSustanon 250. Iyo inozivikanwawo nedzimwewo mazwi akafanana saPrarbolan, Sustanon Prolongatum, uye Duratestone.
Sezvakataurwa pamusoro pechigadzirwa ndechokubatanidzwa kwee testosterone esters. Aya esters ane zvakasiyana zvakasiyana zve testosterone kuwedzera kusvika ku 250 mg ye testosterone, achipa chigadzirwa nhamba ye250 muzita rayo Sustanon 250 Iyi esters ndiyo inoshandiswa zvinoshandiswa mumutambo. Kuwanda kwavo kwakafanana neizvi:
Chigadzirwa chacho chingave nezvimwe zvinoshandiswa zvakadai seBenzyl doro uye maArachi mafuta. Chigadzirwa chacho chiripo sechinhu chinonzi yellow yellow solution. Inonyanya kuchengetwa mumabhodhoro asina mavara.
Sezvatotaurwa, chinangwa chekutanga chekusimudzirwa kweSustanon ne Organon Pharmaceuticals chaifanira kushandiswa pakushandiswa kwechiremba. Izvi zvainyanya kuwanikwa mumishonga inonzi testosterone. Mune zviitiko zvinowanzoitika, testosterone inonzi hormone yemhuka inonzi inonzi androgen. Mune miviri yevarume inokonzerwa nemakumbo. Kusiyana Kwakaipisisa Pakati Pekuedzwa Kuyananisira uye Kuedzwa Tsitsi
Testosterone muvarume inokonzera kukura kwakakwana uye kubudirira. Inobatsirawo kushanda kwezvikamu zvepabonde zvechikadzi pamwe chete nehutano hwevanhukadzi. Izvi zvinosanganisira kukura kwebvudzi uye zviso zvebvudzi, kukura uye kukura kwemasimba nemapfupa, kuwedzera kwezwi revarume pamwe chete nekukurudzirwa kwemasero matsvuku eropa.
Sustanon inoshandiswa mukurapa kwevanhu avo vakaonekwa kuti vane maitiro akaderera e testosterone. Iko kurapwa kunoitwa nenzira inonzi inonzi testosterone inoshandiswa pakurapa. Mamiriro ehutsika echipupuro testosterone angakonzera matambudziko mazhinji kusanganisira kukura kwekutengeserana, kukura kwakanyanya kwezvikamu zvepabonde, nekushaiwa kwevhudzi pakati pemamwe mamiriro.
Sustanon 250 kurapwa kunotungamirira kukura kwemazana ese e testosterone mu plasma yeropa. Mukati meC21 mazuva mushure mekutongerwa kwechirwere, maitiro akaderera e testosterone, Androstenedione, Dihydrotestosterone, neEstradiol vanogona kudzokera kune imwe nzvimbo yakawanda. Kurapa kunobatsirawo mukudzorerwa kwe-follicle-stimulating hormone (FSH) uye luteinizing hormone (LH).
Vanhuwo vanoshandisa steroid iyi yekudzorerwa kwebhuidhi yavo. Izvi zvinovandudza kuita zvepabonde kwevarume kubva ipapo kunowedzera kukosha kwehupenyu. Iyo inobatanidzwa nekukudziridza kwemasvundu akadaro ekuberekorora sechirume chemurume chepabonde, testes seminal vesicles, pamwe chete ne prostate epididymis. Inoshandiswawo zvakare nokuti inobatsira pakuwedzera chiyero chemhizha yekusimudza pamwe nekuita zvepabonde.
Iyi steroid inogona kunyatsorongedzerwa kune vanhu vakagamuchira kurapwa kwakafanana nesheti yepenticular umo testis inobviswa chirwere. Izvi zvinotungamirira kukurumidza kuwira kwemazinga e testosterone muropa remuropa. Zvimwe zvirwere zvakadai se-eunuchoidism kana hypogonadism zvinogonawo kukonzera kuputsika kwemaitiro e testosterone. Izvi zvinogona kutungamirira kumamiriro ezvinhu erectile kusagadzikana, masvondo masvondo, mafungiro ehupenyu, kuneta, kuderedzwa kwepabonde, nekushaya vana pakati pevamwe. Iyi mamiriro anogona kununurwa kuburikidza ne testosterone replacement therapy using Sustanon 250.
Kana ichibatwa naSustanon 250, vanhu vane maitiro epasi e testosterone vanogona kuwana zvimwe zvinotevera:
Kubvisa uropi hwehupi
Kuderedza kuora mwoyo
Iva nesimba rakawanda
Iva nekunaka uye kunzwa kwakanaka
Kuderedza kuneta uye kuneta.
Iyo inobatsirawo pakuwedzera chiyero cheprotini kuitira saizvozvo munhu anogona kuwana mishonga kunze kwekuti awane kuwana mafuta akawanda. Iko kuwedzerwa kwehuwandu hweprotheni inobatsirawo mukugadzirisa kwemasumbu.
Sustanon inowira pasi pechikamu chevanabolic steroid saka kufanirwa kwayo muzvivako zvekuvaka muviri. Inonyanya kushandiswa pamigumisiro yaro yakatsvaga kubatsira varimi vemuviri kugamuchira hurumende yevanabolic munguva pfupi. Iyo inobatanidzawo nekuderedza kushungurudzika kwehomoni inozivikanwa sa cortisol iyo inokonzera kurasikirwa kwemisungo nekuwana uremu.
Ichi chigadzirwa chinoitawo kuti basa rive nyore zvikuru. Ichi ndechokuti inokwanisa kukwidza kuwanda kwemasero matsvuku eropa. Izvi zvinobatsira mukuwedzera kugoverwa kweokisijeni muropa uye naizvozvo kushanda kwakanaka kunokonzerwa nehuwandu hwekuneta. Iyi steroid inobatsira mukuchengetedzwa kwe nitrogen. Nitrojeni inobatsirawo mukugadzira musimba kuvaka.
Sustanon 250 inoshandiswawo nevatambi vemitambo vakadai sevatambi pamwe nevatambi vemauto kuti vavandudze maitiro avo. Vakawanda vemitambo vanoshandisa iyo nokuti inokonzera kushungurudza uye kutsungirira.
Muchipatender, vana vanogona kunge vane Sustanon 250 zvinyorwa. Ichi ndechokuti inokonzera masculinization. Mukurapa kwakadaro, iyo nzira inotorwa pasi peongororo yeyanyanzvi inogonawo kusanganisira kuongororwa kwepfungwa. Vanachiremba vanogonawo kutora nhoroondo yakakwana yehutano hwevanhu. Vanhu vakadaro vanogonawo kuongororwa nguva dzose. Kakawanda kwekutsvaga kunogona kuvimba nemamiriro emuunhu.
Sezvambotaurwa kare, steroid Sustanon 250 yakatanga kubudiswa kunangwa dzezvechiremba. Izvi zvaive zvakanakira kurapwa kwevarume vane testosterone kukwana. Murairo wepakutanga Sustanon 250 dhigiri yakashandiswa se250mg mushure memavhiki matatu oga oga. Nehafu yakasiyana-yehupenyu yeiyo yakagadzirwa esters mumutengo, chiremba chichatanga kusunungura testosterone mukati mekutanga 24-48 maawa emutengo. Kusunungurwa kwe testosterone kunotanga kuderera shure kwemazuva e21, uye iyo ndiyo apo inotevera inotorwa. Mazhinji ematare echigadzirwa ichi anotorwa nemajojo. Ijojo dzinotorwa zvakadzama mumisungo. Misumbu yakadaro inosanganisira gumbo rekumusoro, zvigunwe uye kumusoro.
Nhamba yeSustanon 250 zvisinei, kune zvikamu zvitatu zvevashandisi veSustanon uye naizvozvo chikamu chimwe nechimwe chine dhesi yakananga. Izvo zvikamu zvinosanganisira vanotanga, vari pakati nepakati nevashandisi vepamusoro. Vakatanga vambova nemero inenge iri pakati pe300-500mg nevhiki. Zvose zvinokonzerwa ne testosterone neSustanon dzinotanga neyero sezveruzhinji. Uyu muyero unofanirwa kuve wakakwana kuti upe migumisiro yakakwana kunyange nechepasi.
Dhigirii remukati yevashandi veSustanon vari pakati kubva ku500 mg kusvika ku700mg yeSustanon 250 pavhiki. Vanoshandiswa zvakanyanya veSustanon vanogonawo kuva nepamusoro yeSustanon 250 inowanikwa pasi peyero imwe chete iri pakati. Izvi ndechokuti, pane iyi yezinga, vazhinji vevashandi vari kuisawo Sustanon 250 nedzimwe steroid. Zvisinei, mberi kweSustanon 250 desi inogona kuve pakati pe500mg kusvika 1000mg kwevhiki. Izvo zvakanyanya dhigiriji hazvibatsiri kunyangwe zvakadaro. Izvi ndezvekuti vanowedzera mikana yemigumisiro.
Mu testosterone inoshandiswa kurapwa, iyo yakagamuchirwa Sustanon 250 muyero kazhinji 100mg kwevhiki. Boldenone Undecylenate (Kushanda) Zvishandiso, Purogiramu, Kuyera, Kucheka, Kudhinda
Kubva sezvo esters muSustanon kuwirirana vane testosterone yakasiyana-siyana yokubvisa mazinga, zvakaoma zvikuru kudzora kubudiswa. Somugumisiro, vanoshandisa steroid havangozove vachida kutarisira kuderera uye hafu yehupenyu hutungamiri asiwo zvakakodzera kudhesa. Kuti kuwedzere kushanda kwemisungo, hutungamiri hunofanira kupiwa panguva imwechete ye7 kusvika kune 10 mazuva panzvimbo yemirairo yepamusoro yekuraira kwemazuva 21 kana masvondo matatu. Neesters shomanana muSustanon 250 mutsara, vamwe vanhu vari kutora misi yezuva 3, iyo inoshandiswa kune vanotanga, pakati nepakati nepamusoro. Izvi zvakajairika kune muumbi wemiti. Madzimai akadaro anowanzosanganisira isrogen blocker.
Zvamunoda kuziva musati mawana Sustanon madheji
Kunyange zvazvo Sustanon inogona kurairwa kuvanhu vakasiyana-siyana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana, haisi munhu wose akakodzera madheji. Pane zvakawanda zvehutano umo iwe haufaniri kutora muyero. Zvinotevera ndezvimwe zvezviitiko izvi:
Kana mumwe akave kana kuti anofungidzirwa kuti ane tumamu yehasi kana yeprostate.
Haikodzeri vakadzi vari pamuviri, vachitarisira kuva nepamuviri kana kunyamwisa. Izvi ndezvokuti zvinogona kukanganisa mwana achangoberekwa kana mucheche, kuwedzera mumiriri wemurume.
Mukana kana imwe inokonzera kune zvinoshandiswa zvinoita Sustanon 250, yakadai sepanut uye soya pakati pevamwe.
Steroid haikodzeri vana vari pasi peC3 yemakore.
Kana mumwe munhu aine hypercalcemia; iyo yakakwirira calcium muropa ravo, kana hypercalciuria; iyo yakakwirira calcium mazinga mumuguta.
Inokurudzirwawo kuti usati watora Sustanon 250 dhowa, rega mushonga wemishonga kana kuti chiremba azive kana iwe wakanga uine zvinotevera:
Chirwere chemapfupa kana mutsvo
Vanachiremba vanofanirwawo kutungamira zvakanyanya kune vanhu vane kuwandisa.
Matambudziko akadai sokurara kwepabonde; chimiro umo munhu anoramba achifemerwa panguva yavo yehope, angave akaipisisa nokushandisa michina ine testosterone.
Varume vakwegura vanobatwa ne testosterone vangave vachidawo kuongororwa kwema digital rectal (DRE) prostate-specific antigen (PSA) kuongororwa ropa. Izvi zvinotarisirwa kudzivisa kuwedzera kuwedzera kwe prostate gland.
Chirwere Sustanon 250 dhi-Sustanon haisati yasarudzwa seyakakodzera chigadzirwa chekushandisa nevana nevechiri kuyaruka. Kutarisa kwakakodzera naizvozvo zvinokosha pakubata vana neSustanon 250. Izvi ndezvekuti zvinokonzerwa kukonzera kukura kushoma uye nekuita kuti vaite zvepabonde nekutanga.
Sustanon ine Benzyl doro seimwe yezvigadzirwa. Izvi zvinogona kukonzera mishonga inouraya kune vacheche pasi pemakore matatu. Ichi chigadzirwa naizvozvo hachina kukodzera kuvana vakadaro.
Kushandisa Sustanon 250 nemimwe mishonga-Kusati watora chirwere ichi nemishonga iyi, nguva dzose inokosha kuzivisa chiremba wako wemimwe mishonga yauri kutora. Izvi zvinosanganisira mishonga yemishonga pamwe chete neyeyo iwe unotora pasina chiremba chiremba, kana izvo zvaunotenga kubva kune mabhizimisi nemashambagitari. Ichi ndechokuti mishonga uye Sustanon inogona kukanganisa kushanda kweumwe neumwe. Mimwe yemishonga yakadaro inosanganisira:
Vanhu vari kushandisa mishonga iyi vanoda kuongororwa panguva yesero. Izvi ndechokuti kubatanidzwa kwe testosterone nemishonga iyi kunogona kutungamirira kuodema (kubvumira) sezvo zvigadzirwa zvose zvinokonzera kuchengetedza kwemvura mumutumbi.
Vanhu vari pasi pemapiritsi anopesana neshuga kana e-insulini vangadikanwa kuti vaderedze kudya kwechirapa chakadaro apo vari kurapwa ne testosterone. Saka zvakakosha kuzivisa chiremba wako kana uri kutora mushonga wakadaro.
Izvi ndizvo zvinodhaka zvinotorwa kuti kuderedze ropa kuvhara mumuviri. Paunenge uri pasi pehutano ne testosterone, chirwere chinopesana-kuvhara ropa chinogona kuwedzera. Izvi, naizvozvo, zvinoda kuti uongorore nguva dzose yehuvha yako nguva yekuvhara.
Kushandisa Sustanon nekudya nekunwa-Mushonga uyu hauna kupindira kwakashata nezvokudya zvakawanda pamwe nekumwa. Saka zvinogona kutorwa pasina kunetseka kwezvokudya kana zvinwiwa zvaunotora. Zvakakoshawo kutarisa nguva yekupera kwechigadzirwa. Mishonga iyo nguva yekupera kwayo yakapfuura haifaniri kutorwa.
4.Sustanon 250 Purogiramu
Kana zvasvika kune steroid, ruzivo runoreva nzira yakarongeka iyo inowanikwa steroid inoshandiswa. Izvi zvinofanirwa kunge zviri mukati mekugadzwa kwenguva. Sustanon 250 is steroid yakanyanyisa uye saka inogona kushandiswa pakutsvaira pakuvaka musimba. Inoshandiswawo nevamwe vanhu vari mukutengesa kwechinangwa nekuda kwekurasikirwa nemafuta akawanda uye kuyerwa kunowanikwa mukudengenyeka. Sustanon 250 purogiramu inowanzoita mavhiki masere e12. Iwe unogona kutora nguva yakawanda mukati mekutenderera kubvumira kudzorera muviri wako.
Muzviitiko zvakawanda, vatangisi vangaita kutanga kwendaneti ne 250 mg dose. Zvisinei, varume vakawanda vachitsvaga zvakanakisisa Sustanon 250 pfuma inogona kutora chirwere che 500mg kwevhiki muchitenderera. Kuedza Sustanon oga, pakutanga, inobatsira kuitira kuti iwe uone kuti inopindirana sei nemuviri wako. Zvisinei, inopa migumisiro iri nani kana yakaiswa pamwe nedzimwe steroid.
Iyo vanabolic steroid inonyanyozivikanwa inoshandiswa pakutsvaga neSustanon 250 inosanganisira Dianabol, Deca Durabolin (anonziwo Nandrolone Decanoate), Winstrol, Primobolan, uye Boldenone Undecylenate. Chinyorwa chinonyanyozivikanwa ndecheSustanon chinosanganisira Sustanon 250 akabatwa nemamwe mapiritsi maviri. Muenzaniso wakanaka iSustanon naC deca Durabolin na Dianabol; yakanyorwa se (Sustanon / Nandrolone / Dianabol). Iko kunoumba fodya yakakurumbira yevanabolic steroids.
Kuronga Sustanon Purogiramu inzira inoda nzira yakasimba yekudzivisa kusagadzikana. Zvisinei, kana waita zvakanaka, zvakare zvakare nyore kuti urongedze chirongwa chemishonga iyi. Iwe unofanirwa kuverenga purogiramu ye steroid uye uwane kunzwisisa kwakakwana kwechigadzirwa. Kana uchinge wanyatsoziva zvaunoda uye unonzwisisa zvakanaka zvegadziriro yacho, iwe wakanaka kuenderera mberi pakuronga marongerwo ako.
Kune zvitatu Sustanon 250n purogiramu yepurogiramu. Zvirongwa izvi ndezvokutanga kwepakutanga (inozivikanwawo sechitsigiro chepakati), iyo iri pakati nepakati pekufamba kwenguva.
Izvi zvinotenderera zvakanyanya pane zvebibi zvitsva kana vanotanga. Izvi zvinoshandiswa kune veterans uye zvichiri kubudirira zvikuru. Aya maitiro akawanzo nyore asi ane mabudiro anobudirira kune vashandisi. Varume vazhinji vakwegura vane hutano vanogona kunyatsorega kutsungirira. Mhedziso yekupedzisira yehutenderedzwa inogonawo kutsanangurwa nehupenyu hwemunhu.
Muchikamu ichi, Sustanon inogona kunge iine steroid chete inoshandiswa mumutengo. Izvi zvinokurudzirwawo kuti vatangise kutanga kuti vaone kuti miviri yavo inopindura sei kurapwa. Iyi mhinduro inogona kushandiswa senheyo yekuwana dzimwe steroid. Izvi ndezvokuti mhinduro muSteroid inokosha inogona kushandiswa kufanotaura kupindura kweimwe mishonga. Zvisinei, zvingave zvakakosha kuisa Sustanon ne steroid dzakadai sa Dianabol mukudhonza kwemhepo kana kushandisa Anavar mumutambo wokucheka. Mumuviri wepasi, unogona kushandisa zvirongwa zviviri apo Dianabol kana Anavar inogona kushandiswa. Zvirongwa izvi ndezvizvi:
Vhiki Sustanon 250 Arimidex Dianabol
1st 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
2nd 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
3rd 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
4th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
5th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
6th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
7th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
8th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
9th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
10th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
11th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
12th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
1st 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
2nd 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
3rd 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
4th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
5th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
6th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod
7th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
8th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
9th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
10th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
11th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
12th 500mg kwevhiki 0.5mg / eod 25mg / ed
Izvi zvakakurumbira nokuti zvinosanganisira fodya yakakurumbira yeSustanon / Nandrolone / Dianabol. Ichi chirongwa chinodyiwa kwevhiki nevhiki ye500mg yeSustanon 250 yemavhiki e12, vhiki nevhiki 400 yeNandrolone Decanoate uye zuva nezuva 25mg ye Dianabol. Izvi zvakakurudzirwawo kune vanotanga; zvisinei, kuvhara Sustanon nemamwe makemikari kokutanga vashandisi vakaisa njodzi dzakawanda. Izvi zvinokonzerwa nekusava nechokwadi kwemigumisiro yekugadzika kwakadaro kwemashure. Zvingave zvakaomawo kuziva steroid chaiyo mumutsetse wakatungamirira kuhuipi hwakaipa.
Izvi zvinotevera ndeyeSustanon / Nandrolone / Dianabol:
Vhiki Sustanon 250 Deca Durabolin Dianabol
1st 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki 40mg pazuva
2nd 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki 40mg pazuva
3rd 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki 40mg pazuva
4th 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki 40mg pazuva
5th 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki 40mg pazuva
6th 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki 40mg pazuva
7th 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki
8th 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki
9th 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki
10th 500mg kwevhiki 400mg kwevhiki
11th 500mg kwevhiki
12th 500mg kwevhiki
Izvi zvinenge zviri zvevashandi vakakurumbira uye zvinoratidzwa nemazinga akawanda eSustanon. Inosanganisirawo zvimwe steroid inowedzera. Izvi zvisingagoni kutorwa nemunhu anotanga chero. Izvi zvinogona kutorwa nenzira mbiri, kutanga kwekurwisa uye yechipiri yekucheka sezvinotevera:
Vhiki Sustanon 250 Deca Durabolin Anadrol Arimidex
1st 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 50mg / ed 0.5mg / eod
2nd 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 50mg / ed 0.5mg / eod
3rd 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 50mg / ed 0.5mg / eod
4th 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 50mg / ed 0.5mg / eod
5th 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 50mg / ed 0.5mg / eod
6th 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 50mg / ed 0.5mg / eod
7th 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 0.5mg / eod
8th 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 0.5mg / eod
9th 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 0.5mg / eod
10th 750mg kwevhiki 400m kwevhiki 0.5mg / eod
11th 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 0.5mg / eod
12th 750mg kwevhiki 400mg kwevhiki 0.5mg / eod
Vhiki Sustanon 250 Masteron Trenbolone Acetate Arimidex
1st 750mg kwevhiki 0.5mg / eod
2nd 750mg kwevhiki 0.5mg / eod
3rd 750mg kwevhiki 100mg / eod 0.5mg / eod
4th 750mg kwevhiki 100mg / eod 0.5mg / eod
5th 750mg kwevhiki 100mg / eod 100mg / eod 0.5mg / eod
6th 750mg kwevhiki 100mg / eod 100mg / eod 0.5mg / eod
7th 750mg kwevhiki 100mg / eod 100mg / eod 0.5mg / eod
8th 750mg kwevhiki 100mg / eod 100mg / eod 0.5mg / eod
9th 750mg kwevhiki 100mg / eod 100mg / eod 0.5mg / eod
10th 750mg kwevhiki 100mg / eod 100mg / eod 0.5mg / eod
11th 750mg kwevhiki 100mg / eod 100mg / eod 0.5mg / eod
12th 750mg kwevhiki 100mg / eod 100mg / eod 0.5mg / eod
Pano panewo mhirizhonga inotorwa nevanhu kunze kwekushandisa kushandiswa. Iyo inonzi inonzi hardcore cycle. Izvi zvinounza pamusoro pekuwana zvakanyanya uye zvinotorwa nevakwikwidzana vomuviri. Izvo zvikave zvakadaro zvine ngozi uye zvinoda vanhu vane hutano huri nani. Vashandi vanofanira kunge vane ruzivo rwakanaka rwekuita kweavo vanobatanidzwa steroid uye vanoziva kuti vangagadzirisa sei migumisiro yavo. Vanofanirawo kuchengetedza chekuvhara kwehutano hwavo mukati mekufamba. Muchikwereti ichi, Sustanon 250 chirongwa chakaderedzwa nokuti chinongoshandiswa steroid inotsigira. Izvi zvinosanganisirawo zvirongwa zviviri, kureva kuti, kubvongodza uye kutengesa maitiro sezvinotevera:
Vhiki Sustanon 250
(Zuva rimwe nerimwe) Deca Durabolin
(Purogiramu) Trenbolone Acetate
(Zuva rimwe nerimwe) Dianabol
(Mazuva ese) HGH
(Mazuva ese) Arimidex
(Zuva rimwe nerimwe)
(Zuva rimwe nerimwe) NPP
(Zuva rimwe nerimwe) Testosterone Propionate
(Zuva rimwe nerimwe) Trenbolone Acetate
(Zuva rimwe nerimwe) Masteron
(Zuva rimwe nerimwe) Winstrol
Kugadzirira kwa newbie Sustanon
Kana iri nguva yako yokutanga kuti uzive kuSustanon 250, iwe unofanirwa kuigadzirira zvakanaka. Mazano anotevera achakubatsira kugadzirira kutanga kwe testosterone.
Zvinonyanya kukosha kuti iwe uve nechokwadi chekupa zvakakwana kupa kana kuwana steroid muhupenyu hwose. Kana iwe usingakwanisi kutenga steroid yakakwana, unogona kubuda kunze kwekugovera pamwe chete. Izvi zvinogona kuva nengozi sezvo kupoteredzwa kwavhiringidzika. Kazhinji, haugoni kutora uye kumisa kudya kwe steroid chero zvakadaro.
Nguva dzose tenga zvigadzirwa zvakatendeka. Sezvo chigadzirwa ichi chisina kugamuchirwa munzvimbo dzakawanda, haugoni kungotenga kubva kune chero mutengesi; iwe unofanirwa kuva nemupi wekutendeseka uye akavimbika.
Kana uri kutora chigadzirwa ichocho nekuda kwekuvaka mishonga, unoda kuchengetedza kudya kwakanaka. Kudya kwakanaka kunovandudza kufambira mberi apo pasi pekurapa kwe steroid.
Post-cycle therapy ndiyo chikamu chakakosha pane chero upi zvake. Chirwere chinobatsira pakugadzirisa mahomoni mumuviri wako mushure mokunge uchinge wakakwana. Izvi zvinoderedza migumisiro yechirwere uye inova nechokwadi chokuti zvose zvinoshanda zvakanaka. Mushure mekunge mazadza purogiramu, unoda kutora kwemavhiki mashomanana, uchiteverwa ne-post-cycle therapy. Saka iwe unoda yako-post-cycle therapy yakagadzirira sezvaunotanga kufamba kwako.
Pakupedzisira, nguva dzose inonyanya kukosha kutevera mirayiridzo yakakodzera paunenge uchienda. Vamwe vanhu vangave nani zviri nani Sustanon 250 kupfuma kupfuura iwe muhutano hwakafanana, iwe haufaniri hako nokuda kwechikonzero ichocho funga nezvekuwedzera yako Sustanon 250 muyero.
5.Sustanon 250 migumisiro
Chimwe chezvinhu zvinoita kuti Sustanon yakasiyana zvikuru nedzimwe steroids ndeyekuti inosanganisira esters mana. Izvi zvinoita kuti ive steroid yakanyanyisa uye isina simba inogadzira mitsva yakareba kwenguva refu. Nandrolone Decanoate Uses, Purogiramu, Dosage, uye Zvinoshungurudza
Saka ihwohwo ndeyekuita steroid inokurumidza iyo inobatsira pakuvaka nekukurumidza kwemisungo. Nzvimbo itsva dzinoshandisa Sustanon 250 purogiramu pasina stacking inokwanisa kuwana kune 20 lbs. pamagumo evhiki dze12.
Sustanon ine uwandu hwe testosterone. Somugumisiro, kuwedzerwa kunowedzera chiyero chemetabolism mumuviri wako. Izvi zvinobatsira nekukurumidza kupisa kwemafuta akawanda mumuviri.
Zvinokwanisika kuwana zvinoshamisa zvematomu zvigumisiro kunyange kunyange nezvishoma zvishoma zveSustanon 250. Migumisiro yacho inogara yakasimba uye ine simba rakakura uye simba remisungo. Ichi ndicho chikonzero icho chinokosheswa zvikuru nevatambi vemitambo pamwe chete nevadziviriri. Sustanon 250 inoshandiswawo nevamwe vanhuwo zvavo kunze kwevashandi vemasikirwo nevashambadziri. Vanhu vakadaro vanoedza kuva muscular uye kuwedzerwa. Ichi chigadzirwa chinobudisa zviitiko zvinoshamisa zvevanhu vakadaro. Izvi ndezvekuti vanogona kuvaka chimiro chikuru chinosanganisa kushanda kwakanyanya.
The zvawanikwa of Sustanon 250 inogona kusimbiswa nekushandisa imwe steroid yakasimba ye stacking. Sustanon 250 pfuma inogonawo kuva yakakwirira zvichienderana nesarudzo ye stacking steroids yako. Semuenzaniso, kushandisa Dianabol yekuvhara mukati muhafu yekutanga yemutambo (6weeks) kunogona kukonzera kuwana kusvika pa 20-25 mapaundi mukati kwenguva pfupi. Paunomira kutora Dianabol, unogona kurasikirwa kusvika ku7-10 yeaundi mapaundi. Ichi ndechokuti ivo vakaita semagumisiro ekuchengetedza mvura. Wakavaka rusununguko rwe testosterone kubva kune ichi, Sustanon inotora kubva pano kuti irambe ichivaka mashuga akachena ayo asingatambudzi nekudururwa kwemvura inoshandiswa nemuviri.
Kuwedzerwa kwechirwere ichi kunotungamirira kune zvikwereti zvakanyanya. Zvisinei, haufaniri kungowedzera dhairi yako chero zvakadaro. Iko kunofanirwa kuitwa pasi pekutarisirwa kwakanyatsorongedzwa nachiremba wako. Izvi ndeyekudzivisa zvisingadiwi zvakaipa zvisina kunaka. Vaya vanogona kubvumira kuwedzera kwemutero vanogona kuenda mberi nekuwedzera. Chinhu chinokosha apa ndechokuti kuve nekuenzanisa pakati pekuwana uye zvingave nemigumisiro.
Kudzora migumisiro yechirwere
Kungofanana nedzimwe mishonga, Sustanon 250 inouya nemamwe matambudziko. Mashoko akanaka ndeokuti izvi zvinokonzerwa nemigumisiro inonyanya kudzora kana mushonga unoshandiswa zvakakodzera. Mimwe yemigumisiro iyi inogonawo kuzvisarudzira sezvo nguva inopera. Ichi ndechokuti muviri wako unofananidzwa nekuchinja kwehomoni ne nguva. Mamwe emigumisiro iyi inogona kusanganisira zvinotevera:
Izvi zvinokonzerwa nekuchinja kwemahomoni. Izvi zvinogona kutungamirirwa nekutaura kwechiremba pakutanga kwekutanga. Iwe unofanirwawo kuchengetedza kudya kwakakodzera, hydration uye kuva nehope yakakwana. Izvi zvinobatsira mukudzikisa mafungiro emafungiro.
Kubvisa ndeimwe yezvikamu zvakakosha zvinokonzerwa neSustanon 250 dose. Kuramba hydrated ndeimwe nzira iyo iwe unogona kudzivirira izvi. Iwe unotofanirawo kuderedza nguva yaunoramba usingachaitiki mune rimwe zuva. Izvi zvinogona kudiwa nokuda kwevanhu vanoshanda mumahofisi. Vanhu vakadaro vanofanira kutora zvimwe zvinhu zvakadai sokufamba. Izvi zvinoita kuti lymphatic system ishande uye inobatsira kubvisa zvinodhaka zvakanyanya.
Zvinetso zvakadaro zvinosanganisira zvinetso zvemuviri, chirwere chekuda, uye kusuruvara pakati pevamwe. Zvizhinji zvezvinetso zvakadaro kuzvigadzirisa.
Sustanon 250 desi inogona kuguma nokuva neganda rine mafuta pamwe chete nemakwenzi. Iwe unogona kudzivisa izvi kuburikidza nekushandisa muviri uye chiso chinoshambidza izvo zvisina mafuta. Iwe unogonawo kushandisa zvigadzirwa zvakatemerwa zvinoshandiswa mukurapa mababa.
Imwe nzira yekudzora migumisiro yechirwere ndeyokushandisa inhibitors yakafanana naArimidx. Izvi zvinodzivirira testosterone kutendeuka kuva estrogen. Somugumisiro, pane kuderedzwa kwekuchengetwa kwemvura pamwe nekuderedza mikana ye gynecomastia. Inodzorawo mafungiro ehupenyu uye hunyengeri.
6.Sustanon 250 hafu yeupenyu
Hafu yehupenyu yeipi steroid inoreva nguva yakatorwa nehafu ye steroid iyoyo kuti iparadzwe nemuviri. Muchidimbu hafu-upenyu steroids inotora nguva shomanana mumutambo wako. Saka ivo vangada madhawi akawanda. Kunyange hafu yeupenyu huri senzvimbo yemishonga, inogona kuchinjwa nezvimwe zvinhu mukati memushandisi. Saka, hafu yeupenyu hwechirwere inogona kutora nguva shoma kana yakareba kune mumwe munhu pane mumwe munhu.
Sustanon 250 hafu yehupenyu, somuenzaniso, inoratidzika muzvigadzirwa zvine pharmacokinetics yakaoma nekuda kwekuvapo kweeseri dzakasiyana. Imwe ester imwechete, somuenzaniso, inowira muhafu yezvikamu zvayo mushure mekumwe kwemazuva. Mushure mokupeta kaviri yenguva iyoyo, mazinga ayo zvakare anowira nehafu-kuguma kusvika muchina chezvaimbove. Izvo zvikamu zvinowira zvakare nehafu kusvika muchisere chezvaive mushure mokunge katatu iyo nguva. Masayeri akasiyana muSustanon 250 ane zvakasiyana nehafu-upenyu.
Somugumisiro, iyo Sustanon 250 hafu upenyu haina nguva yakatarwa yenguva. Mushure mekujaira neSustanon 250, vazhinji statics inoratidza kuti inowira muhafu yezinga rayo shure kwemazuva 4. Nhamba idzi dzinogona kuwira mukati mechina kusvika pazuva regumi. Nemazuva gumi nematanhatu, mazana acho angave akawira pasi rechisere musi wegumi nematanhatu wakateverwa neyegumi nematanhatu ne 23rd zuva. Kana zvasvika pakugadzira muviri, Sustanon 250 hafu yeupenyu inobatsira vashandisi kuti vasarudze mberi kwavo.
Iyo hafu yakasiyana-inorarama nemumwe weSustanon esters inoita kuti ive steroid yakasimba. Saka zvinokwanisika kuwana zvakakurumidza uye zvinogara kwenguva refu zvichibva kune dose. Izvi zvinobatsira vashandi kuti varambe vakagadzikana muzinga we steroid mumuviri pasina kudiwa kwejojo ​​dzakawanda. Zvinyorwa zvina zvinotapukira kuburikidza nehydrilysis nekukurumidza sekunge kamwe pakarepo mushure mejojo. Iweseri ina inoshanda mukugadzirisa umo avo vane nguva yakareba hafu-hupenyu vanotora mushure mekuwa kwemajaya evaya vane shorter half-lives. Izvi zvinotevera hafu-hupenyu hwetestensterone esters dzakasiyana dzeSustanon 250
Pakati peesters mana, propionate ine chiito chiduku zvikuru nehafu yeupenyu hwe2 kune mazuva 3. I testosterone inopinda munguva pfupi uye inogona kutanga kuita mukati meawa ekutanga e24 mushure mejojo.
Izvi zvinonziwo propionic acid phenyl ester. Inorambidza pakati pepropionate uye isocaproate. Iyo yakareba inoshanda kudarika propionate uye ine hafu yeupenyu hwe4 kune mazuva 5. Iyo inotora nguva yakareba kudarika propionate nenzira iyo inoramba iine chimiro chakasimba che testosterone mumuviri sekuti propionate inobva mumuviri.
Izvi zvine chinogara kwenguva refu kana ichienzaniswa ne phenylpropionate. Inonziwo isohexanoate, 4-methylvaleric acid uye isocaproic acid. Uyu testosterone ane hafu yeupenyu hurefu kupfuura testosterone phenylpropionate. Iine hafu yeupenyu hwe7 kune mazuva 9. Kana iyo inoshandiswa seumwechete testosterone, inoshandiswa mushure mevhiki imwe neimwe. Iyi ester haina kungowanikwa muSustanon250 asi inogona kuwanikwa mune imwe steroid yakadai seAratest uye Omnadren.
Iyi ndiyo ester yechina mune chigadzirwa Sustanon uye ine hafu yeupenyu hurefu. Pakati peesters inoshandiswa mu-steroid, ester decanoate ndiyo yakareba ester. Hupenyu hwayo hupenyu hunogona kupfuura mavhiki maviri. Izvozvo zvinogona kuva nehupenyu hunoshingaira hwemazuva akawanda. Izvi zvinotungamirira kukutenda kuti Sustanon inorirwa kamwechete pamwedzi. Zvisinei, izvi zvinongoitika chete muhomoni inoshandiswa kurapwa. Kune ester iyi, kuderera kwe testosterone kunotangira mushure memavhiki maviri; saka, varimi venyama vanoda kuve nekuwanda nguva dzose ye testosterone muropa ravo vanogona kufunga kuvhara Sustanon vhiki nevhiki. Mamwe mazita echirevo che decanoate ester anosanganisira nonanecarboxylic acid, decanoic acid, decylic acid, uye capric acid.
Nehafu yakasiyana-yehupenyu yezvinhu zvose zviri pamusoro apa, kune chigarire chakasimba che testosterone muropa kubva kune injection depot. Zvisinei, kuburitsa mberi kwe testosterone hazvirevi hazvo.
7.Sustanon 250 zvinobatsira
Kunyange zvazvo vanhu vazhinji vachibatanidza Sustanon 250 nechinangwa chekukurudzira zvepabonde kwevarume, mishonga inoshandisa zvakawanda uye inobatsira kune vashandisi. Ichokwadi Ichokwadi kuti Sustanon igadziriro yakanakisisa yevanhu vanotambura nechepasi mazinga e testosterone. Iyo yakagadzirwa Sustanon inotengeswa inoita basa rakafanana seyakangoita testosterone. Ihwowo ndiyo nzira yakakwana yekusimudzira mitambo yekuita. Inobatsira kuderedza mafuta akawandisa mumuviri pamwe chete nekuvaka masimba ekuvaka. NeSustanon iyo inotengeswa kuva musanganiswa we testosterone esters yakasiyana, imwe neimwe yei esters inoita basa rinokosha pakuita Sustanon imwe yesterodi yakasiyana zvikuru mumusika. Zvimwe zvepamusoro zvinobatsira zveSustanon 250 zvinotevera:
Sustanon inoshingaira zvikuru pajojo. Izvi zvinobatsira kuvaka misumbu zvakanyanya kwazvo kune vashandisi. Izvo zvinewo kushanda kwenguva refu uye naizvozvo hazvidi kuti munhu arambe achivarova nguva dzose sezvinoitika kune dzimwe steroid.
Kuenzaniswa kune dzimwe steroids, Sustanon ndiyo inonyanya kushandiswa uye ine steroid yakagamuchirwa. Izvi zvinonyanya kukosha nokuda kwezvakasiyana zvayo.
Sustanon 250 inopawo imwe nzira yakanaka yekucheka. Iyo inovandudza kutenderera kwekucheka kwevanhu vanoda kutsva mafuta uye vanorasikirwa nemhuka yakashata. Kana yakashandiswa mukugadzirwa kwepakati, zvigumisiro zvinowedzera zvakanyanya.
Ichi chigadzirwa chinobatsirawo mukudhinda kwemagetsi. Ichi ndechokuti inobvumira munhu kuva nehuwandu hwekusimudzira nitrogen. Nitrogen inoshandiswa pakuumbwa kwemisungo. Somugumisiro, izvi zvinopa vanhu vanopfuura vanabolic mumhepo uye saka vane vanabolic mamiriro emuviri. Izvi zvinobatsira kushanda kwevashandi vakawanda uye weightlifters.
Kushandiswa kweSustanon kunowedzerawo chiyero cheprotini synthesis. Mapuroteni ndiwo maitiro makuru ekuvakwa kwemisumbu yemaviri. Pamusana pekuwedzera kwehuwandu hwepuroteni inogadzirwa mumuviri, misi miviri inokura nokukurumidza zvikuru uye ichibatsira varimi venyama.
Oxygen inobatsira zvikuru mukugadzirwa kwemasumbu ematemu kuvaka mumuviri. Iko kunofanirwa kuve nekuwane zvakakwana oksijeni muropa. Sustanon ine basa rinokosha mune izvi. Ichi ndechokuti inowedzera kuverengwa kwemasero matsvuku eropa mumuviri. Izvi zvinopa kuwedzerwa kwomweyaji muropa.
Sustanon inopawo inhibitor yakakwana yehomoni yakadai seglucocorticoid. Aya mahomoni anonziwo mahomoni anorwadza. Glucocorticoid hormone inokurudzira kuchengetedza kwemafuta uye kuparadzwa kwemisumbu inosuruvara inowedzera utano hwako. Apo Sustanon inoshandiswa, kutonga kwemahomoni aya kunorwisana uye kuderedzwa. Izvi zvinoguma nehutano huri nani, kuchengetedza kwemafuta mashoma, nekushanda kunobudirira.
Vashandisi vezvinodhaka izvi vanobva vadzoka kubva mumamiriro ezvinhu akaderera se libido, kutendeseka, erectile kudzvinyirira kusuruvara pamwe nekushaya hope. Sustanon 250 inowedzerawo hutano hwepfungwa uye inovandudza zvirwere zvekudzivirirwa kwezvirwere zvichiita kuti utano huve nani kune vashandisi.
Imwe Sustanon 250 inobatsira ndeyokuti ine mitemo ine simba zvikuru. Kushandiswa kwakakodzera kwechirwere uye kushandisa chigadzirwa chakanaka hachikuratidzei kune zvinowanzovhiringidza migumisiro. Saka iwe unoda kutevera mirairo zvakanaka uye utenga Sustanon 250 kubva kune vatengesi vanovimba.
8.Sustanon 250 mhinduro
Sustanon 250 yave iri steroid inobatsira pakati pevanhu vakawanda vakashanda pasi pemishonga yavo yekugadzirwa kwemuviri kana kuti hormone replacement therapies. Izvi zvinoratidzika kubva kune vakanaka vashanduri kudzokorora kubva kune avo vane ruzivo rwechigadzirwa kana avo vanochiri kushandisa. Heano mamwe acho Sustanon 250 mhinduro:
Brandon Leigh ndeimwe yevashandi vanoshandisa chigadzirwa ichi. Akashandisa chigadzirwa kwemwedzi mitanhatu, anofara nemigumisiro. Anoti anonzwa achishamisika nokuti haana kumbova neipi yakaipa Sustanon 250 migumisiro. Iye haanawo kunge akave nemigumisiro yakaipa pamutsipa wake wegumbo kana kuti bvudzi. Akavewo akashandura libido uye uyu murume anofara kwazvo.
Hamza mumwe mushemi wekuvaka muviri anofarira kusingaperi kweSustanon 250 akatenga uye akabatanidza mukufamba kwake. Kunyange zvazvo akanga achizeza pakutanga, akafuridzirwa nekunakidza zvikuru uye akanaka kune vashandi vadzokorora akaverenga pamusoro pechigadzirwa. Akazopedzisira atenga chigadzirwa chacho pakupera kwevhiki yechina yekufamba kwake; iye akanga atova nemigumisiro yakanaka kwazvo. Akazviona pachake muchionioni uye chakanga chiri chinonakidza zvikuru. Akange agamuchira pamusoro pe50% yemakasimudziro ake, simba rakanaka uye simba. Akange agamuchira kuwedzera kwe4kg mumuviri wemasumbu. Nekushanda kwake pajimini uye mapuroteni kudya, aive nemigumisiro yakaisvonaka kwazvo. Nenguva yechina yekutenderera kwake, aigona kuita kunze kwekutanga uye kwekushanda asi akachengetedza mapuroteni kudya. Ichi ndechokuti chigadzirwa chakanga chatoshanda mumuviri wake. Yakanga yashandura nguva yake yose yekushanda. Akagamuchirawo kuderedza kukuru kwemafuta. Akatenda zvikuru uye anoronga kuramba achishandisa ichi chigadzirwa mumakashure ake. Hamza, saka, anorumbidza chigadzirwa ichi kune ani zvake anotarisa mitsva yakaisvonaka mukufamba kwavo kwekuvaka muviri.
David ndeye 48 yemakore yemurume akamboita uye kubvisa kushanda kwechikamu chikuru chehupenyu hwake. Dhavhidhi akanga achitarisira kudzorera simba rake rokutanga, kukura, uye kuyerwa kwaakanga atofa. MuSustanon 250, akashandisa Dianabol se steroid yakawedzerwa yekuwedzera. Izvi zvakamupa migumisiro yakanaka kuburikidza ne21st zuva rekutenderera. Akakwanisa kuwana zvikamu zve 6 mapaundi pamagumo emamiriro aya. Mukuwedzera, akawedzera masendimita maviri kumakumbo ake, 1 inch nemaoko ake uye imwe masentimita pachifuva chake. David anonyatsonakidzwa neizvi sezvo yakashanda zvakanaka sezvinenge zvisingabatsiri kupisa. Anodawo kuenderera mberi nehuwandu hwezvimwe zviwanikwa uye zviri nani.
Sam mumwe muongorori angada kugovera mamwe mashoko nevamwe vashandisi kana avo avo vanoda kushandisa chigadzirwa ichi vasati vauya kunzvimbo yekutenga. Sam murume anowanzova nechido chekugwinya uye kuora muviri. Senguva refu Sustanon 250 user, iye anofara nokuti akave nemigumisiro yakanaka kubva pachigadzirwa. Sam anoda kushandisa nguva yake kunze nevemhuri yake paanenge asiri kubasa. Anoda magomo ekuputika pamwe nezvimwe zvinhu zvakadai segorofu. Anoti mushure mekutevera nzira dzakarurama muSustanon 250 maitiro ake, akagamuchira migumisiro yakanaka nemigumisiro yakanyanya. Akakwanisa kuchengeta muviri wevanabolic uye anokurudzira Sustanon chero ani zvake anoda.
Melissa inogara kwenguva refu mukadzi anomhanyisa. Anonyanya kumhanyira kunonakidza asi dzimwe nguva anowanzobatanidzwa kune mamwe madzinza. Iye pamwe nechishuvo chehutano hwepanyama chinosanganisira kuchena mumuviri. Saka, iye, anoshanda nguva dzose kuita basa kuti arambe akaenzana. Anoshandisa midziyo yekushanda yakadai semapurisa uye zviduku mumabasa ake. Sezvo anoshandisa Sustanon steroid, Melisa ane chiremba chaiye anongoronga maitiro ake uye anomubatsira panguva dzose dzaro. Somugumisiro, anokwanisa kutsungirira kushanda kwakakura kunorema kuwanda uye kuwedzera mukupa kumupa muviri wakakwana wemuviri wake. Anogona kutora marudzi akawanda uye anovapedzisa zvakanaka pasina kunyanya kuneta. Anoti anofara naye Sustanon uye anonakidza Sustanon kuwana.
maka mudzidzisi wakasimba mumuviri. Anoshandawo pamwe nevatsigiri vehutano avo vakawanda vanoshandisa Sustanon 250 nemamwe steroid. Akabatsira vakawanda vashandi vake kuti vawane migumisiro yakanaka kwazvo nekushanda uye Sustanon kuwedzera. Vazhinji vevatengi vake vakakunda mazita mumakwikwi avo akasiyana. Mark ndiye navashambadziri vake naizvozvo vakashamiswa nezvinodiwa naSustanon zvinogona kuita kune vashandi vekuvaka muviri. Anonyanya kurumbidza chigadzirwa ichi.
9.Sustanon 250 inotengeswa
Sezvambotaurwa kare, Sustanon is steroid anabolic iyo isingagamuchirwi uye naizvozvo zvisingabvumirwi nemutemo mune dzimwe nyika. Sezvo zvakadaro, havasi vese vanotengesa vanotengesa chigadzirwa chacho vanogona kuvimbwa. Saka iwe unofanirwa kuchenjerera kana uchitenga chigadzirwa kubva kumadhaka ekudenga uye pasi pevhu. Izvo hazvisizvo zvakare kutenga chigadzirwa pamusoro pekambani sezvo iri chiremba-mishonga chete. Zvakakoshawo kuziva kuti Sustanon 250 inotengeswa inogonawo kuwanikwa pasi pemamwe mazita. Zvisinei, nekuda kwekuzivikanwa uye zvakasiyana-siyana zvekushandiswa kwezvigadzirwa, avo vanoda kutenga Sustanon 250 vachawana zvakawanda mumusika. Inowanikwawo mumatengo akakwana kana achienzaniswa kune mamwe anabolic steroids.
Sustanon inotengeswa inouya nemakero akasiyana-siyana kubva kune vatengi vanofanira kusarudza. Icho chiri pasi pevhu reklasi (UG) pamwe chete neGirasi remishonga. Iyo yemishonga-gorosi yevanabolic steroid inotengeswa nemakambani emishonga anogamuchirwa kubva kune FDA kana zvimwe zviremera. Izvozvo steroids saka zvepamusoro-soro, dzinouya nekururamisa kwakakwirira maererano neringing pamwe chete nechivimbo chekushaya simba uye kuchena. Izvo zvisingabatsiri nemishonga iyi ndeyokuti dzinotengeswa pamutengo mukuru kwazvo.
Pasi pasi mabhandi anobudisa Sustanon kutengeswa pasina FDA kugamuchirwa. Izvozvo steroids zvingadaro zvisiri pamutemo kune dzimwe nyika. Vangangodaro havakwanisi kukusimbisai nezvehutano. Izvi ndezvokuti zvinoenderana nehutano hwebazi pamwe chete nezvivako mubazi. Kubudirira mune izvi steroids ndeyokuti vanotengeswa pamatengo akaderera. Saka pane pane chisarudzo chemutengi kuti atenge Sustanon kubva pasi pevhu kana kuti semishonga yemishonga. Izvi, zvechokwadi, zvinoenderana nekukwanisika kwavo, zvinodiwa, uye zvavanofarira pamwe nezvinokosha.
Saka pane zvakawanda zvinobva kune vanhu vanogona kutenga Sustanon semuchina wemishonga. Kune makambani emishonga mune dzimwe nyika dzakawanda seCanada, India, uyewo nyika dzakawanda muEurope neNorth America mune dzimwe nzvimbo.
Nhasi, kusvika kwekutengeserana kwepaInternet kunopa imwe nzvimbo inokosha yeSustanon 250. Saka zviri nyore kuti Tenga Sustanon 250 online. Iwe unodawo kuva nehanya kune mawebsite aripo kuitira kuti urege kudzivisa. Kuti iwe uchengetedze Sustanon 250 online zvakachengeteka pano pane mamwe emitemo yaunofanira kufunga.
Vatengesi vemarudzi ose vanowanika munzvimbo dzakadai seChina, Mexico, pamwe neEurope. Nyaya dzemasayiti epasi rose anokwanisa kupa Sustanon 250 sekirasi yemishonga saka ndeyechokwadi. Vanopawo mari pamabhadharo ekubvisa saka vanobvisa zvinetso zvakawanda zvinowanikwa munzvimbo dzakawanda dzepaIndaneti.
Kana uchitenga kubva kune vatengesi vemunharaunda, zvakakosha kuve nechokwadi chokuti chigadzirwa chacho ndechehutano hwakanaka usati watanga kutenga zvinhu zvakanyanya. Izvi ndezvokuti zvingasava nyore kuwana vanotengesa venguva yakavimbika.
Iwe unogonawo kusarudza kutenga prohormones. Izvi zvinosanganisira Sustanon 250 mapiritsi uye mahwendefa. Izvi zvinogona kutengwa nyore nyore kubva kumapromasi eko. Sustanon 250 vadziri vangave vanopawo zvigadziriswa zvinowanikwa kuti iwe utenge.
Kunewo mazita asingazivikanwi vatengesi vekutsvaga munogona kutarisa. Saka iwe unogona kutumira pane mawebsite paunenge uchida kutenga Sustanon 250 online.
Usashamiswa nemamwe mawebsite epaIndaneti anopa zvikwereti zvisinganzwisisiki zvishoma zveSustanon mitengo. Nzvimbo dzakadaro dzewebhu dzingasave dzisina mhosva.
Pose paunoda kutenga Sustanon online, nguva dzose funga webhusaiti yakanaka. Somuenzaniso, kana ukawana webhusaiti yepasi rose, funga kana inogona kutumira chigadzirwa kune imwe nzvimbo yako. Dzimwe dzewebsite idzi dzakabatana zvakananga kune Sustanon 250 kana kuti dzinotenga kubva kuSustanon 250 mutengesi.
Kutumira uye kuendesa mari ndeimwe chikonzero chinokosha chaunofanira kufunga paunenge uchitsvaka kutenga sustanon250 online. Ikoko kunogona kunge kune mawebsite anotumira mahara asingabhadharwi kana kutengesa mari shoma. Vamwe vatengesi vangasanganisirawo mutero wetsika mukutumira uye kutora mari. Saka iwe unoda kubvunza Sustanon 250 mutengesi kana mari yavo yekutumira inosanganisira mitero yemitambo. Vatengesi vanojekesa tsika dzemitemo zvakanaka kuti vasarudze. Izvi ndechokuti chigadzirwa chinogona kuendeswa kumba kwako nyore nyore.
Zvinogona zvakare kuwana Sustanon250 inotengeswa nechezasi kana yakakwirira kudarika kuwandisa kwemazinga. Izvi zvingava mamiriro apo iwe unotenga Stanton 250 kubva kune asingazivikanwi Sustanon 250 mutengesi. Saka chigadzirwa chakadaro naizvozvo hachina kunaka. Saka iwe unofanirwa kuongorora kutarisa kunaka kwechigadzirwa usati watanga kana kutenga mune zvakawanda. Iwe unogona kutora icho chigadzirwa ku laboratori kuti uone kuisa mukati mechigadzirwa ichocho.
10.Sustanon yekuvaka muviri- chidimbu
Kuzivikanwa kwaSustanon 250 kwekuvaka muviri hakugoneki. Sustanon inoumba steroid yakakurumbira mumusika nekuda kwekuvaka muviri. Izvi zvinozivikanwa zvinobva pakuti icho chigadzirwa chinobatsira zvakawanda. Kunze kwekunyanya kushanduka uye kusine simba, inoshanda zvikuru. Aya esters ari (propionate, phenylpropionate, isocaproate, uye decanoate.) Akabatanidzwa kuitira kuti chigadzirwa chacho chivandudze mararamiro ayo mune zvekuti vane kusiyana kwehafu yeupenyu. Izvi zvinosanganisira nguva yakareba uye pamwe nekuita zvishoma-esters esters. Neeseri dzakadai, inobereka zvibereko mukati mechinguva chiduku (nguva pfupi mushure mejojo). Iyo inogarawo murefu mumuviri. Izvi, zvinopesana nemamwe akawanda steroid, inopedza kudiwa kwejojo ​​dzakawanda pazuva.
Sustanon 250 naizvozvo chibereko chakakwana nemigumisiro inoshamisa. Kuti iwe uwedzere migumisiro neSustanon 250, zvakakosha kutevera muyero wakataurwa kwauri nechiremba kana chiremba. Izvi ndechokuti chigadzirwa hachishandi zvakafanana kune vanhu vose. Panewo humwe hutano hunozogadzirisa kuti sei muyero wako unofanirwa kuva. Iwe unofanirwawo kutevera Sustanon 250 purogiramu yako zvakanyatsoteerera, uchiteverwa nemakumbo uye mushure maitiro ekurapa. Izvi zvinoderedza mikana yemigumisiro yemigumisiro. Kushandisa Sustanon 250 kwekuvaka muviri kunoitawo kuti zvive nyore nokuti zvine zvigadziriswa zvinokonzerwa nemigumisiro.
Inonyanyawo nyore kushandisa chigadzirwa chekuvaka muviri. Ichi ndechokuti ndeyekuwanikwa kwayo mumusika. Sustanon 250 inotengeswa inogona kuwanikwa kubva kune zvinyorwa pasi pevhu kana makambani anogamuchirwa nemishonga. Iyo inogonawo kuwanika kubva kune vasingazivikanwi vatengesi vepaIndaneti. Zvose zvaunoda ngwarira nevatengesi vamunosarudza kutenga kubva. Somuenzaniso, kana iwe Tenga Sustanon 250 in bulk, iwe unofanira kutanga uongorore kutendeseka kwewebsite uye nehuwandu hwechigadzirwa. Ndizvo chete mushure mokuwana mutengesi anodikanwa waunofanira kutenga mumakwikwi.
Sustanon 250 naizvozvo chinhu chinobatsira zvikuru pakuvaka muviri. Iyo inouya nehutano hwakanaka zvikuru. Kana iwe uri kutsvaga nzira yakakwana yekuvaka mishonga yako nezvishoma zvishoma, Sustanon 250 naizvozvo ndiyo mhinduro yakanaka kune iwe. Icho chigadzirwa chakakosha kuedza uye chakakoshawo mari yako yose.
Harris Ron; Real Bodybuilding: Muscle Chokwadi kubva kune 25 Makore muTrenches (2008) p.50
Nam Paul; Kuvaka muviri uye Steroids: Nyaya yangu Yega (2017)
Spellwin Geaorge; Testosterone Steroid Cycles: Kubatanidza Ikupedzisira Sustanon 250 Cycle (2015)
Tilin Andrew; The Doper Next Door: My Strange and Scandalous Year on Performance-Enhancing ... (2011) p 38,
Collins Rick; Mutemo Wemutemo: Anabolics muAmerica (2002) p172, 173,427